Nezvedu - Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd.
Hebei Guanlang hwokushandura zvinhu zvipenyu Co., Ltd. rakaumbwa muna 2007, riri Shijiazhuang guta rinova guta guru Hebei Province uye nomusimboti kwemauto pakati Beijing Tianjin uye Hebei uye ane mukana wokufambisa nyore. Yedu kambani yazvino yepamusoro-tech chemakemikari bhizinesi neResearch & Development, kugadzirwa uye kutengesa.
Kambani yedu ine simba rakasimba rehunyanzvi, michina yemhando yepamusoro, yakasimba sisitimu manejimendi manejimendi uye yepamusoro-yekutengesa sevhisi, inonamatira kune "mutengi kutanga uye kufambira mberi" bhizinesi uzivi uye inosimbirira pakuvimbika sekurarama kwekambani. Zvese zvekugutsikana kwevatengi, zvese zvekusimudzira kwenguva refu zvine hutano zvebhizinesi. Mumakore gumi apfuura, isu tanga tichinyatso tarisa rese rekutengeserana maitiro, tichitarisa pane zvese zvese, tichipa vatengi zvese-kutenderera masevhisi senge kutenga chigadzirwa, R & D, mhando kutonga, zvigadzirwa zvekugadzirisa uye zvichingodaro, uye kuva akavimbika pamwe kambani uye mudiwa vatengi vedu. Mazuva ano Isu takaumba mhando hombe, hombe chikamu, dzakakwana zvikamu, yakanatswa degree, yakawedzera kukosha uye yakakwira tekinoroji yezvigadzirwa chigadzirwa cheni .Pane akati wandei akateedzana anosanganisira emishonga zvigadzirwa, chikafu giredhi zvinowedzera, giredhi remaindasitiri, fetiraiza giredhi uye zvicherwa zvigadzirwa.
Mumakore mashanu apfuura, kambani yakateedzera zano re "kubuda" zvine simba. Isu tasimbisa matavi edu muHubei China, Vietnam neMexico, tichiita musika wedu uye wekutengesa network zvakanyanya uye zvakakwana. Kambani yedu inoenderera ichitevedzera kurongeka kwekugadzwa kwemakemikari indasitiri mune ramangwana uye makwikwi mazano ekusiyaniswa kwechigadzirwa kusiyanisa, uye kuyedza kuve kune inotungamira yeChinese chemakemikari indasitiri.
Senzira yekushandisa zviwanikwa pane irwo ruzivo rwekuwedzera mukutengeserana kwenyika dzese, tinogamuchira tarisiro kubva kwese kwese pawebhu uye pasiri pamhepo. Zvisinei nezvezvinhu zvemhando yepamusoro zvatinopa, inoshanda uye inogutsa kubvunza sevhisi inopihwa neboka redu rinokwanisa-rekutengesa. Item rondedzero uye zvakadzama parameter uye chero imwe info info weil inotumirwa kwauri panguva yakakodzera kune iyo mibvunzo. Saka ndokumbira utange nesu nekutitumira maemail kana kutifonera kana iwe uine chero mibvunzo nezve sangano redu.